Hogaamiyaha Xisbullaah Oo Sucuudiga Ku Eedeeyey Inuu Dagaal Ka Dhex Bilaabayo Lubnan | Somaliland Today
← La Taliyihii Hore ee Amaanka Qaranka Maraykanka Oo Lagu Eedeeyey Fadeexado Musuq-maasuq.
Maraykanka oo Ka Digay Faro-gelin Lagu Sameeyo Lubnaan. →
Hogaamiyaha Xisbullaah Oo Sucuudiga Ku Eedeeyey Inuu Dagaal Ka Dhex Bilaabayo Lubnan
(SLT-Lubnan)-Hogaamiyha ururka xisbilah ayaa ku eedeeyay dowladda Sacuudiga in ay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Lubnaan ,todobaadyo uun ka dib markii uu iscasilay rai’sul wasaarihii Lubnaan Sacad al Xariiri.
Xassan Nasrallah ayaa sheegay in mr Xariiri uu la hayste u yahay xukuumadda Sacuudiga.
Mr Nasrallah ayaa sheegay in Sacuudiga ay dagaal ka dhex hurinayaan dadka reer Lubnaan.
Waxa uu sidoo Sacuudiga ku eedeeyay in ay ku kicinayaan Israa’iil oo ay kaashanayaan.
Ururka awooda badan ee Shiicada ee Xisbulahi ayaa waxa taageera dowladda Iran oo ay si wayna isaga soo horjeedaan Sacuudiga .
Mr Xariiri ayaa isagu iscasilaadiisa ku saleeyay khatar uusan sheegin waxa ay tahay oo naftiisa soo wajahday.
Hasa yeeshee madaxwaynaha Lubnaan Michel Aoun iyo siyaasiyiinta kale ee sarsare ee Lubnaan ayaa waxay dalbanayeen in mr Xariiri uu dib ugu soo laabto Lubnaan .
Mr Aoun ma uusan aqbalin iscasilaada Xariiri uu iska casilay xilka raisul wasaaraha.
Mr Xariri si toos ah uma uusan hadal tan iyo wixii ka dambeeyay iscasilaadiisii oo ahayd mid lama filaan ah.